Heshiiskii Jabuuti Oo Durba Burbur Qarka u Saaran | Marsa News
Heshiiskii Jabuuti Oo Durba Burbur Qarka u Saaran
Hargeisa:(Marsanews) Heshiiskii dhawaan ku dhexmaray Somaliland iyo Soomaaliya dalka Jabuuti, ayaa u muuqda mid durba inuu burburo qarka u saaran, ka dib markii dhinacyadii ku heshiiyey iyo dowladda Jabuuti midba war ka duwan wixii lagu heshiiyey uu dhinaciisa baahiyey.
Dowladda Jabuuti waxay shalay War-Murtiyeed ka soo saartay heshiiskii labada dhinac ku dhexmaray magaalada Jabuuti, kaasi oo lagu sheegey qoddobo aan ku jirin heshiiskii hor dhaca ahaa ee habeenimadii Arbacadii ee taarkhdu ahayd, 17 June 2020, lagu kale saxeexdey magaalada Jabuuti. Qoddobadaasi oo kale ah;
In labada dhinac ku heshiiyeen abuurida guddi hoosaad kale oo ka wada hadasha sidii ay u wada maamuli lahaayeen hawada Somaliland.
In labada dhinac fududeeyaan isku socodka bulshada, dhaqanka, ciyaaraha, fanka, suugaanta iyo ganacsiga ee aan siyaasadeysneyn.
Qodobadan kor ku xusan, ayaa waxa durba jawaab degdega ka bixiyey Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliland Md. Yasiin Maxamuud Faratoon, oo sheegey in khalad dhinaca daabacaada ahi dhacay oo qoddobkaasi hore ee hawadu si khaldan ugu soo baxay War-murtiyeedka, halka qoddobka isku socodka uu caddeeyey inay isla qaateen.
Madaxweynaha maamulka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo waxa uu maalintii shalay saxeexey xeerka duulista dalka, kaasi oo aad moodo in lagaga sii hordagayo qoddobkii heshiiskii Jabuuti ku jirey ee ahaa maamulka hawada in guddi loo saaro ka wada-hadasha.
Waxaanay u muuqataa in sharcigan degdega ah ee uu saxeexay Madaxweyne Farmaajo, labada aqal ee Baarlamaankuna ansixiyeen aanay ku niyadsamayn Farmaajo iyo dowladiisu shirkii Jabuuti wixii lagu heshiiyaan.
Dowladda Jabuutina war Murtiyeedkan qoddobadiisa ay sida aadka ah uga qayliyeen dadweynaha reer Somaliland ee dhawrka cisho ka dib ay soo saarteyna wuxu u muuqdaa mid aan badhkiis la isku ogeyn, inkastoo qaabka wasiirka Faratoon uga jawaabay ay ahayd mid jilicsan.
Dhinaca kalena Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani, ayaa isna dowladda Somaliland ku dhaliilay qarinta heshiikan laga daba keenay oo ugu baaqay inay shacbiga reer Somaliland u caddeeyaan una soo bandhigaan qoddobadii heshiiska oo dhamays tiran.
Haddaba waxa dhawrka maalmood ee soo socda kale cadaan doonta in qoddobkan dowladda Jabuuti si badheedha ugu dartey heshiiska, inuu khalad dhinaca daabacaada ah yahay sida Wasiir Faraton inoo sheegay, iyo in madaxweynaha iyo weftigisiisu heshiisyo qarsoon oo wali badh dhiman yihiin kusoo saxeexeen Jabuuti.
Haddladan dowladda Jabuuti kasoo saartey shirka ka dib, jawaabta Faratoon iyo Ficilka Farmaajaba waxay ka marag kacayaan in heshiiskii Jabuuti ku dhexmaray Somaliland iyo Soomaaliya yahay mid qarka u saaran inuu burburo.